Sida Loo Ballaariyo Diiwaankaaga - Toddobaadka Faafitaanka Qaranka
Kordhinta diiwaankaaga waa habka lagu burburiyo diiwaankaaga si aysan ugu muuqan shaqo bixiyaasha ama sharci fulinta. Toddobaadka Kordhinta Qaranka waa Sebtember 19 - 26! Alex Boutros iyo Mo Will oo ka socda Cannabis Equity Illinois Ku soo biir si aad ugala hadasho dib-u-habeynta cadaaladda dambiyada oo noo sii mariso nidaamka ka bixitaanka.
Ka daawo dhacdada YouTube ama dhagayso Podcast cinwaan looga dhigay Sida Loo Ballaariyo Diiwaankaaga - Toddobaadka Ballaarinta Qaranka ee Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois on Spotify, Google Play, ama meel kasta oo aad ka dhageysato podcasts!
LA XIDHIIDH BADAN: Fasaxidda Cannabis ee Illinois
LA XIDHIIDH BADAN: Xeerka MORE
Su'aalaha iyo jawaabaha ee Cannabis Equity Illinois
Waa maxay Cannabis Equity Illinois?
Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois: Isbahaysiga Cannabis Equity IL waa a doogga aan macaash doonka aheyn ee xubnaha bulshada ee udagaalamaya hubinta in sharciyeynta xashiishadda loo sameeyo dayactirka iyo dib u maalgashiga bulshada saameynta weyn ku yeelatay dagaalka daroogada. Waxaan bilownay sanadkii hore sharciyeynta markii uu jiray baaq ka yimid xubnaha bulshada sinaanta xashiishka iyo baahi loo qabo goob bannaan.
Xaddidaad noocee ah ayay la kulmaan kuwa diiwaanada dambiyada wata?
Sida laga soo xigtay xarunta horumarka Mareykanka, dadweynow ku lug leh Nidaamka sharciga ee Mareykanka wuxuu la kulmi karaa in ka badan 44,000 oo cunaqabateyn sharci ah oo ka hor istaagi karta inay shaqo helaan, helaan liisamo, helitaan iyo dayactirka guriyeynta, u qalmidda kaalmada dadweynaha, raadinta sare waxbarashada, kaqeybgalka kaqeyb qaadashada bulshada, badalida xaalada socdaalka, helitaanka haynta ilmo yar, iyo taasi waa ma wax kasta. In Illinois, waxaa way socotaa 1,189 sharciyo ciqaab joogto ah oo gaar ah. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Ma ku codeyn kartaa diiwaan dembiyeed?
Haa! Gudaha Illinois, waqtiga kaliya ee xuquuqdaada codbixinta lagaa qaaday waa intaad xukun kuheleyso gudaha asluubta hay'ad, Tiradan furlough sidoo kale. Isla marka lagu sii daayo, aad xuquuqda codbixinta waa la fasaxay. Si kastaba ha noqotee, tani maahan kiiska gobollo badan. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Khasaarashada micnaheedu waa maxay?
Burburinta sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay in diiwaanka la burburiyey, oo aanu jirin la heli karo loo shaqeeyaha ama sharci fulinta (marka laga reebo FBI iyo socdaalka) Si kastaba ha noqotee, siyaasadaha ku kala duwan gobol-gobol. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Waa maxay farqiga u dhexeeya cayrinta, ciqaabta, iyo xiritaanka diiwaanka dembiga?
Sidii hore loo soo sheegay, khafiifin ayaa loo maleynayaa si loo burburiyo rikoor laakiin shaabadaynta ayaa marin u leh sharci fulinta iyo loo shaqeeyeyaasha qaarkood iyo dawladnimo hay'adaha, sida haddii aad dalbatid degmada baarkinka ama aad ka shaqeyso iskuul. Dib-u-xukumid waa farsamo ay badanaa adeegsadaan folx kuwaas oo ku xidhan si ay dib ugu soo noqdaan xukunkii ay hore u bixiyeen si loo helo xukun hoos u dhacay. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Suurtagal ma tahay in la dheereeyo diiwaankaaga qareen la'aan?
Haa! Waxyaalaha badankood waa suurtagal iyada oo aan qareen iyo ayaa loogu yeeri lahaa “Pro se”. Si kastaba ha noqotee, waraaqaha sharciga ah iyo sharci-dejinta aad ayey ugu adkaan kartaa qofka maalin-socodka ah inuu dhex socdo, marka waan la wadaageynaa Gargaarka Sharciga ee Chicago, Oo yaa yaab leh oo buuxa wakiil si ay uga caawiso folx inay diiwaanka ka tirtirto ama ay xirto. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Immisa ayey ku kacaysaa inta badan in la tuuro diiwaankaaga?
Degmada Cook, marka hore waa inaad heshaa warqaddaada RAP, taas oo ah $ 16 isla markaana xaashida RAP ee carruurta aan qaan-gaarin ay lacag la’aan tahay. Markaa waa inaad xareysaa Isdhaafka waraaqaha oo ah $ 9 kiiskiiba. Si kastaba ha noqotee, waxaad mar walba codsan kartaa ka-dhaafitaan lacag ah. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Miyaad nooga socon kartaa hawsha tirtirka diiwaankaaga?
Degmadda Cook, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad tagto xarunta CPD oo lagaa qaado faro, taas oo kharashka $ 16, oo codso dhallintaada sidoo kale waa lacag la'aan. Kadib inta lagu gudajiray cudurka aafada, waxay kuu soo diri doonaan boostada, halkaas ayaad ka buuxin kartaa oo ka xareyn kartaa Isdhaafka waraaqaha shaqada oo bixi lacagta. Si aad u hesho faahfaahin faahfaahsan oo tallaabo ah, fadlan kaayaga ama Kaaliyaha Sharciga ee Chicago's FB-ka si aad u daawato webinarkeenna "sida loo banneeyo". Waxaad si toos ah ugu soo diri kartaa sawirka diiwaanadaada criminalrecords@legalaidchicago.org ama wac 312.229.6071. Waxaan bilaabaynaa Isdhaafka saacadaha xafiiska si loo sii wado maalmaha xaashida RAP iyo Isdhaafka gargaar. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Maxaa ka dhigaya qof u qalma in diiwaanka laga tuuro?
Gudaha Illinois, kaliya seddex nooc oo kiisas ah lama saari karo ama lama xiri karo oo ay ku jiraan xadgudubyada yar yar ee taraafikada, DUI, Xukunka Baytariga Guryaha, Ku Xadgudubka Amarka Ilaalinta, dembiyada galmada (marka laga reebo dhillaysiga ama anshax xumada dadweynaha), ama Dembiyada Xayawaanka. Loogu talagalay dhalinyarada, wax walba laakiin helitaanka dambiga ee heerka koowaad iyo dembiyada galmada ee u baahan diiwaangelinta. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Illinois cinwaannada cinwaannada loogu talagalay tirtirayaa 700,000 oo rikoor oo ay weheliso sharciyeyn. Ma jiraan dowlad goboleedyo kale oo leh hindiseyaal daboolitaan oo ku xiran sharciyadooda sharciyeynta sidan oo kale?
California way sameysay, waxayna ogolaadeen in otomaatig lagu rido. Gobolku wuxuu ku qiyaasayaa ku dhowaad 200,000 oo qof in tirtiridoono diiwaanadooda iyadoo ay ugu wacan tahay howshan. Illinois waxay ubaahantahay inay horay usocto daboolka. Kufsiga xashiishadda ee dhammaan dambiyada, Kufsiga otomaatiga ah ee ugu ballaaran ee suurtogalka ah, E-Filing, iyo kheyraadka si loo yareeyo sannadka sannadka kariye + waqtiga sugitaanka. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Sharciyeynta Cannabis ma tahay asal ahaan dib-u-habeyn caddaalad dambiyeed?
Dhab ahaan maya. Waa inaan wax badan la dagaallano si aan xitaa ugu dhowaanno waxa aan dooneyno. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Miyaad u maleyneysaa inay suurtagal tahay kuwa lagu xaddiday fursadaha shaqo diiwaanadooda darteed inay dib u helaan mushaharka fursadaha shaqo ee ka maqnaa?
Taasi waa wax laga naxo. Iyo wax aan u dagaalami karno. - Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Toddobaadka Kordhinta Qaranka
Sida Loogu Ballaariyo Diiwaankaaga Toddobaadka Faafitaanka Qaranka
Ku buuxi diiwaankaaga usbuuca ballaadhinta Qaranka. Toddobaadka ballaarinta Qaranka, oo la bilaabay 2018 haddana waa dhacdo sanadle ah. Waxay bixisaa xayiraadda, adeegyada gargaarka xukun-dambiyeedka ka dib, iyo adeegyo kale oo badan oo xagga bulshada iyo taageerada ah, waddanka oo dhan.
Shaqadooda, oo aan ku xaddidnayn xashiishadda, waxay ujeedadeedu tahay inay awood u siiso bulshooyinka inay la qabsadaan, joogteeyaan, noolaadaan, ayna abuuraan raadinta sinnaanta. Iyo, oo ay ku shaqeeyaan dad midab leh, CUSUB wuxuu abuuray beel ka kooban shakhsiyaad heegan ah oo u adeega abaabulayaasha iyo u doodayaasha.
Kooxda ayaa sidoo kale sii daayay a Warbixinta Saamaynta 2019 taas oo dib u eegis ku sameyneysa ololihii dayrta ee la soo dhaafay taas oo gelisay 652, oo ay ku jiraan diiwaangelinta cod-bixiyayaasha, in ka badan 3,000.
Maxay Tahay Sababta Toddobaadka Toddobaadka Baroodka Qaranka
Si aad u tirtirto diiwaankaaga waxay qaadeysaa talaabada ugu horeysa ee helitaanka guryeynta, waxbarashada, iyo adeegyada kale ee aan had iyo jeer loo heli karin kuwa xukunka lagu rido. Toddobaadka ballaarinta Qaranka ayaa fursad u ah dadka Mareykanka ah ee ku baahsan waddanka oo dhan inay ka soo kabsadaan wax laga qaatay magaca dagaalka daroogada.
Dhaqdhaqaaqan aasaasiga ah si loo nadiifiyo iyo / ama loo shaabadeeyo xukunnada xaqa u leh si looga caawiyo hagaajinta nolosha kooxaha inta badan la takooro ee Mareykanka iyadoo la dhigayo waddada gargaarka sharciga, iyo bixinta adeegyada bulshada iyo bulshada.
In kasta oo daraasaduhu muujinayaan in dadka Mareykanka ah ee ka soo jeeda asal ahaan ay si isku mid ah u isticmaalaan xashiishadda, dagaalka daroogada ayaa si gaar ah ugu adkaaday kooxaha laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo, tusaale ahaan, Afrikaanka-Mareykanku waa ku dhowaad afar jeer waxay u badan tahay in loo xiro xadgudubyada xashiishadda iyo shakhsiyaadka qaarkood-ugu badnaan dadka laga tirada badan yahay-, ilaa maanta, waa xabsi ku jira wax loo sharciyeeyay qaab uun 33 ka mid ah 50-ka gobol ee Maraykanka.
Dadka ku xukuman daroogada waxay la kulmi karaan waqti adag maalmo badan oo ka mid ah noloshooda, sida helitaanka guri, shaqo, ama dalbashada maalgelinta kuleejka. Isku-darka cuqdada iyo sharciyada kala duwan ee gobolka ayaa xaddidaya ka-qayb-galkooda shicib ahaan iyo yaraynta fursadaha ay ku helayaan adeegyada bulshada ee saxda ah.
Xitaa waddooyinkooda xirfadeed way xadidan yihiin maadaama ay jiraan in ka badan 15,000 qodobbo sharci iyo sharciyeed dalka Mareykanka oo xadidaya ruqsad siinta kuwa leh xukun dambiyeed. Taasi waxay ka dhigan tahay dadka leh daroogada lagu xukumay inaysan xaq u yeelan karin rukhsadaha gobolka ee looga baahan yahay inay ku tababaraan meelihii ay doorteen ee gobollada qaarkood (sida hantiileyaal, dhaqaatiirta qurxinta, ama dhakhaatiirta)
Sanadka 2018, 92% ee 663,367 qof ayaa la qabtay marijuana waxaa lagu soo oogay haysasho fudud, in kasta oo xaqiiqda ah in ku dhowaad 30% dadka qaangaarka ah ee dalkan ku nool ay ku nool yihiin gobollo si sharci ah loogu isticmaalo dadka waaweyn. In 2017, ka qabashada xashiishka ayaa ka sarreeyay qabqabashada dhammaan dambiyada rabshadaha wata wada. Waxaadna u badan tahay inaad aad ula yaabi doontid inaad maqasho in tirooyinkaasi ay kasii xumaayeen sannadihii ka horreeyay.
Iyada oo caqabadahaas oo dhan ay dad badan oo Mareykan ah wajahayaan, dhaqdhaqaaqa ayaa ah daadiyaan diiwaanka xashiishadda si dhakhso leh ayuu u korayaa aadna loo ammaanay. Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan kabarato shaqadooda ha moogaanin Qeybkeenna Wararka Sharciyeynta Cannabis ee loogu talagalay dhaqdhaqaaqan.
Jadwalka Toddobaadka Kordhinta Qaranka
Dhaqdhaqaaqani wuxuu leeyahay tirooyin aan caadi ahayn labadii sano ee la soo shaqeeyay:
Sannadkii 2018, waxay caawiyeen 298 qof oo bilaabay hawsha nadiifinta iyagoo 18 dhacdo ku yeeshay 15 magaalo
Sanadka 2019, CUSUB wuxuu caawiyay 652 qof inay bilaabaan howsha nadiifinta rikoorka. Tirada dadka helay adeegyo kale sida diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha, taageerada shaqada iyo baaritaanka caafimaadka waxay ahayd 3,069 qof.
Sidoo kale, qabanqaabiyeyaashu waxay ku qiyaaseen in dadaalka uu abuuray faa iido guud oo dhan $ 7,143,964, qaab mushaar kordhin ah, dhimista qarashka dadweynaha iyo faa'iidooyinka kale labada sano ee soo socota. Sanadkii la soo dhaafay waxay ka saareen 44 munaasabadood magaalooyin ka badan 30. Iyada waad arki kartaa kuwooda Warbixinta Saamaynta 2019
Sannadka 2020, buunbuuninku hoos uma dhicin. A muuqaalka jilaaga majaajillada ah ee Seth Rogen kobcinta dhaqdhaqaaqa ayaa laga yaabaa inay sidoo kale ka caawisay dhagaystayaasha cusub inay ogaadaan CUSUB. "Waxaan sii wadi doonnaa inaan u dagaallano dib-u-habeyntaas annagoo adeegyo toos ah u siineyna bulshooyinka caddaaladda ay saameysay," ayuu yiri Torie Marshall, oo ah agaasimaha Dayactirka Cage-Free Repair, oo ka mid ah qabanqaabiyaasha.
Waa maxay faafin?
Baahinta dacwadu waa geedi socod meesha diiwaanka dambiyada lagu "shaabadeeyey", oo macnaheedu yahay in laga tirtiray dadweynaha. Sida la ogyahay cawaaqib xumada haysashada diiwaan dembi ayaa kuu matali kara:
Dhibaato ku saabsan shaqaalaynta, inaad lumiso shaqadaada ama aad ku sii socon weydo xirfaddaada;
Sumcad dhaawac ah,
Faa’iido-darrooyinka ka dhasha khilaafaadka haynta carruurta
Dhibaato kireysasho guri
Diidmada kuliyadaha iyo kaalmada ardayda
Qiimaha sare ee caymiska
Luminta xuquuqda codbixinta
Kala noqoshada shatiga xirfadeed
Markaa inkasta oo daadinta ay u egtahay mid ka mid ah ereyada aadka u macaan ee ay adeegsadaan qareennadu, haddana waxay macno ahaan u beddeli kartaa noloshaada si ka wanaagsan.
Muxuu Yahay Nidaamka Lagu Raadinayo Diiwaankaaga
Codsiga inaad tirtirto diiwaankaaga way sahlan tahay koox laakiin xaqiiqdii waad sameyn kartaa naftaada. Badanaa, howsha tuurista lafteeda waxay ka bilaabataa buuxinta codsi ama diyaarinta codsi si aad u codsato tuurista, u keento dukumiintiyada loo baahan yahay, uguna gudbiso arjiga maxkamada dambiyada awooda leh si uu garsooraha dib ugu eego iyo go'aankiisa.
Nidaamku wuu sii murgi karaa iyadoo ku saleysan kiisaska iyo gobollada ku lugta leh, sidaas darteed waxaan kugula talineynaa inaad caawimaad ka hesho qareen khibrad leh si aad fursad fiican ugu hesho in lagaa oggolaado ka saaristaada.
Immisa ayey igu kacaysaa in diiwaanka la iga saaro?
Si loo dheereeyo diiwaankaaga qiimuhu wuu kala duwanaan karaa. Kharashka xaraynta iyo maxkamada badanaa waxay u dhexeysaa $ 10 ilaa $ 400 laakiin, si daacad ah, waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa kiiska iyo gobolka. Waa inaad baaris ku sameysaa xulashooyinkaaga oo maskaxda ku haysaa inaad haysato taageerada ururo aan faa'iido doon ahayn sida qabanqaabiyaha Toddobaadka ballaarinta Qaranka oo diyaar u ah inuu ku siiyo gacan, ha ka waaban inaad la xiriirto iyaga.
Maxaan sameyn karaa si aan u Taageero Toddobaadka Faafitaanka Qaranka?
Xashiishadda aan qafis lahayn bilaabay, olole lacag loogu uruurinayo CUSUB si looga caawiyo nadiifinta ama yareynta diiwaanada ku saabsan eedeymaha xashiishadda ee loo yaqaan TUS JACAYLKAAGA.
Si toos ah waad ugu deeqi kartaa sababta. Laakiin sidoo kale, ganacsiyada waxaa lagu casuumay inay kaqeybqaataan aruurinta iyada oo loo marayo suuqeeda dhijitaalka ah. Ganacsiyadu waxay uga qaybqaadan karaan "Abuureyaal," oo waxay ku xirmi karaan Toddobaadka Baadhitaanka Qaranka illaa Ogosto 22, iyagoo siinaya qayb ka mid ah faa'iidooyinka wax soo saarkooda illaa iyo kilinigyada toddobaadka baabinta ee 2020 iyo sannadka oo dhan dadaallada dib-u-habeynta caddaaladda.
Isbahaysiga Cannabis Equity Illinois
Ma xiisaynaysaa inaad marti u noqoto? Iimayl ku soo dir soo-saareheena at lauryn@cannabislegalizationnews.com.